शङ्कालुहरु – मझेरी डट कम
लेखिएको थियो—“तिमी कस्ती निठुरी ! म दिउसो भरि पर्खिएँ । कि आउनु पछर्, आउन नमिल्ने भए म्यासेज ता पठाउनु पर्छ । माया गर्नेको यही हो चाला ?!”
लक्ष्मणको टाउको मोबाइलमा आएको सन्देश पढ्दा नपढ्दै तातेर आयो । अघिसम्म सती सावित्री देखिएकी उनकी श्रीमती अहिले तुरुन्तै बजारिया आइमाईको रुपमा परिणत भइन् । के हो यो बुढेस कालमा यस्तो ? लौ अफेयर्स पनि बेलामा पो हुन्छ त ! उनका मनमा अनेकौं तर्क कुतर्कहरु ओइरिए । मनमा शङ्काको बादल मडारिन थाल्यो । सुनिताले पकाएको र अहिलेसम्म स्वादले खाइरहेको चिया र खाजा पनि गनायो । के हो यो ? म घरमा नभएको मौका पारेर कतै कसैसँग यस आइमाईको……. छि छि छि !!
उनका मनमा नानाभाँतीका शंका उपशंका ओइरिए ।
मुडअफ भयो । के गरौं र कसो गरौं भन्ने भावनाले उनी हँुडलिन थाले ।
दायाँ बायाँ हेर्न सोच्न नै सकेनन् । वास्तवितकता के थियो यसतिर उनको ध्यानै गएन जानै सकेन । सन्देशको यथार्थता के हो भन्नेतिर उनको सोचाइ समेत जान सकेन । एकदम रिसले तिलमिलाए । सुनिता र उनका मुटुका टुक्रा मानेका छोरा छोरी पनि उनकै हुन् के त ? यहाँसम्मको सोच पनि उनका दिमागमा पस्यो । यसै गरी धेरै बेर तिमिलाए ।
उता सुनिता भने पकाइतुल्याइको आफ्नो काममा व्यस्त थिइन् । साँझ प¥यो । सुनिताले खाना तयार पारिन् र खान बोलाइन् । एक पटक बोलाउँदा भान्सामा आएनन् दुईपटक बोलाउँदा पनि उनी आएनन् । मनमा तुमुल कुभावनाको मुस्लो खनिरहेको बेला थियो । पत्नीने खान बोलाएको उनलाई केही थाहै भएन ।
अब लक्ष्मणजीको बिग्रिएको मुड एक्कासी उल्टियो । भान्सामा गएर हतारहतार सुनितालाई म्वाइँ खाए र भने म पनि कति पापी रहेछु ! छि !”
“हन आज के हो बुढेसकालको यो रोमान्टिक मुड ! फेरि पापी र सापी केके भनिसिन्छ हजुर पनि ! मैले ता केही पनि बुझिन है !” सुनिताले भनिन् ।